Dugsiyada hoose-dhexe | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Sida qoys loo dhisto iyo sida carruur dalka Iswiidhan loogu korsado / Dugsiyada hoose-dhexe
Dhammaan carruurta ku nol Iswiidhan waa in ay sagaal sano dhigtaan dugsiga hoose-dhexe. Taasoo ku xusan xeerka dugsiyada Iswiidhan, waxaana lagu magacaabaa waajibkadhigashada dugsiga. Sannad-dugsiyeedka waxaa la dhigta xilliga dayrta iyo xilliga gu’ga. Waajibka-dhigashada dugsiga canuga waxuu bilaawdaa sanadka xilli dugisyeedka xilliga dayrta uu canuga gaaray 7 sano ama marka uu bilaabaayo fasalka koobaad ilaa xilliga gu'ga ee fasalka 9aad.
Carruurta dhamaantood waxeey dugsiga hoosedhexe dhigtaan 9 sano. Masawirqaade: Colourbox
Hoowlaha waxbarashada dugsiyada waxeey lee yihiin qorsho lagu magacaabo qorshaha-koorsooyinka iyo qorshaha-barashada. Waxaa halkaas ku qoran waxa uu canuga ku baranaayo dugsiga iyo habka waxbarashada loo socodsiinaayo. Waxbarashada iyo buugaagta lacag la'aan ayee uu yihiin caruurta ku jiro dugsiga hoose-dhexe. Sido kale qado lacag la'aan ayaa lagu siinaa dugsiga hoose-dhexe.
Waalidku wuxuu xaq uu lee yahay in canugiisa u doorto dugsiga. Caruurta markasto waxeey xaq uu lee yihiin in ee boos-dugsiyeed ka helaan meesha ee degan yihiin. Haddii aad dooneeyso in aad dugsi kale uga dalabto, waxaad la xariireeysaa maamulaha dugsiga aad la dooneeysid canugaada. Canuga wuu bilaabi karaa dugsiga haddii uu boos ka banaan yahay.
Carruurta aan dhigan karin dugsiga hoose-dhexe ee caadiga ah, waxay dhigan karaan dugsiga hoose-dhexe oo gaar ahaan loogu tala galay carruurta eey wax si ka yihiin. Dugsiga gaarka ah waxaa ltusaale ahaan loogu tala galay caruurta dhagoolka ah ama maqalkoodu hooseeyo. Dugsiga kale ee gaarka ah, särskola, waa mid loogu tala galay caruurta garashada dhiman oo noqon karta wax eey ku dhasheen ama wax eey gadaal ka qaadeen. Ardayda dugsiyadaan dhigto waxaa waxbarashada lagu siiyaa taageeroo dheeraad ah.
Maadooyinka waxbarasho ee dugsiga hoose-dhexe
Maado waa waxa qofka loo dhigo, sida xisaabta ama af iswiidhishka. Maado kasta waxay leedahay qorshe-koorso, kaasoo eey ku qoran tahay aqoonta ardayda laga doonaayo markii u dugsiga hoose-dhexe dhameeyo.
Waxbarashada galmada iyo wada noolaashaha
Dugsiyada Iswiidhan waxaa laga dhigta maadada xiriirka la leh galmada iyo wada nololashada, taasoo ku xusan qorshaha-waxbarshada. Waxeey ku saabsan tahay jaceeyl iyo habka uu qofka xariir ku dhisan xushmad, sinnaan iyo jaceyl uu ula yeelan karo qof kale. 50kii sano ee ugu dambeeyay ayaa dugsiyada Iswiidhan laga dhigaaye maadadda xiriirka la leh galmada iyo wada nololashada.
Ardayda waxeey shahaado helaan laga bilabaa fasalka 6aad. Xilli dugsiyeed kasto kadib ardayga waxaa la siiyaa shahaado. Xilli dugsiyeedka ugu danbeeyo ee fasaslka 9aad ayaa la siiyaa ardayda shahaada-dhameeystirka.
Shahaadada waxaa lagu qiimeeyaa darajooinka A, B, C, D, E ama F. Halka darajada F uu dhigan tahay in ardayga ku dhacay maadada. Darjada ugu sareeyo shahaadada waa A.
Hey'adda waxbarashada (Skolverket) ayaa go'aamisay nidaamka shahaadooyinka. Hey'adda waxbarashada waa hey'ad dowladeed oo ku raacsaan in caruurta iyo ardayda ku jiro iskuulada iswiidhishka helaan waxbarasho leh tayo iyo bey'ad fiican.
Haddii mid ka mid ah waalidiinta ama labadooduba ay yihiin kuwo ku hadla af aan ahayn af- iswiidish, waxay carruurtooda xaq u leeyihiin in loo dhigo afka hooyo. Si uu xaq ugu yeesho dhigashada waa in uu canuga aqoon asaasi ah uu lee yahay luuqada isla markaana maalin kasto ku isticmaala guriga.
Ardayga afkiisa hooyo usan ahayn af-iswiidish wuxuu xaq uu leeyahay barashada af-iswiidishka luqad labaad ahaan. Af-iswiidishka luqad labaad ahaanta waxaa loogu tala galay aradayda biloowga ah ama kuwa in yar af-iswiidishka ka yaqaanno. Maadada Af-iswiidhishka luuqada labaad ah waxeey ku heer tahay maadada iswiidhishka caadiga ah laakin wax-dhigashada waxaa loo habooneeysiiyay ardayda afkooda hooyo uusan aheeyn afka iswiidhishka.
Fasallada dugsi u diyaarinta
Waxaa jiro fasallo dugsi u diyaarin ah oo loogu tala galay carruurta dhawaan Iswiidhan yimid. Fasallada dugsi u diyaarinta waxaa carruurta lagu tababaraa af-iswiidishka iyo maadooyinka qaarkood. Ardaydaas waxaa loo tababaraa hab ay ugu sii gudbaan dugsiga hoose-dhexe. Barida waxeey ku xiran tahay da'da ardayga, afka hooyo iyo aqoontiisa. Degmooyin badan ee Iswiidhan ku yaallo ayaa laga hela fasalada u diyaargaraynta.